आइपुग्यो तपाईंको टोलमा पनि आलो पिचको गन्ध? :: Setopati
रोशन सिग्देल काठमाडौं, मंसिर १९
काठमाडौंमा तपाईंका टोलमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिँदैछन्? आलो अलकत्राको गन्ध तपाईंको घरछिमेकमा आइपुगेको छ? डोजरले आलो पिच पेल्दा सडक जाम भएको छ कि?
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट फ्रिज हुने डरले हतारहतार काम गर्ने नेपाली विकासे मोडलको सट्टा यसपालि हिउँदमै असारे चटारो देखिएको छ। धमाधम उपत्यकाका सडकहरूमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुरिँदै छन्। ठीकै चलेका सडकमाथि पनि अलकत्रा थप्ने काम जारी छ।
बल्खु, झम्सिखेल, त्रिपुरेश्वर, चावहिललगायत ठाउँमा पछिल्ला केही दिनदेखि पूराना सडकमा नयाँ पिच हाल्ने काम भइरहेको छ। बिहान सबेरैदेखि राति अबेर बत्ती बालेर अलकत्रा ओछ्याउनेदेखि लोडरले पिच पेल्नेसम्मको काम भइरहेको छ।
सामान्यत: सडक मर्मतसम्भार गर्ने हिउँदमै हो। यसपालिको चटारोका पछि भने अर्कै कारण छ- प्रधानमन्त्रीको निर्देशन।
मंसिर पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएपछि नयाँ मन्त्री र सचिवसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे। छलफलको मुख्य एजेन्डा थियो, आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको प्रगति।
प्रधानमन्त्रीले सोही छलफलामा अर्को चार महिनामा काठमाडौंका सबै खाल्डाखुल्डी पुरिसक्ने निर्देशन दिए।
उनले झोक्किँदै भने, ‘काठमाडौंमा खाल्डाखुल्डी र धुलोको गीत कति सुन्ने हामीले? पत्रपत्रिकामा त्यही छ, एफएममा त्यही छ। टीभीमा त्यही छ। अनलाइनमा त्यही छ।’
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चौमासिकसम्म खाल्डाखुल्डी पुरिसक्नमात्रै निर्देशन दिएनन् ठेक्का लिएर आलटाल गर्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्द गर्नसमेत भने।
सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काममा कडाइका साथ अनुगमन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सेतोपाटीलाई बताए।
‘दशै तिहारसम्म सडक निमार्णको लागि ठेक्का दिन समय लाग्छ। त्यसपछि चाडपर्व भयो त्यसैले त्यो बेलामा काम केही कम हुन्छ। अहिले यसै पनि सबैभन्दा बढी सडक बनाउने समयनै हो,’ भुसालले भने, ‘सडक निमार्णमा प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएपछि भने काममा तीव्रता आएको छ।’
त्यसो त प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पनि तीन महिनाभित्र उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि पनि पटक-पटक प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, त्यसको कार्यन्वयन भएको थिएन। यसपालि भने सरकारले सडक मर्मतसम्भारमा बजेट पनि बढाएको छ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा यो वर्ष सडक मर्मतमा नै बढी बजेट भएकाले पनि सडक निमार्णको काम बढी भैरहेको बताए।
‘यो वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका सडक आवधिक गर्न मात्रै साढे एक अर्बको आसपासमा बजेट छ,’ उनले भने, ‘यसअघिका वर्षमा ५० करोडको आसपास मात्रै विनियोजन हुने गरेको थियो।’
यसपालि काठमाडौंभित्र मात्रै सडक मर्मतका लागि ८७ करोड रुपैयाँ बजेट छ। त्यस्तै ललितपुरमा २७ करोड बजेट सडक मर्मतको लागि छुट्टयाइएको छ। उपमहानिर्देशक सापकोटाले त्यसमा सबैभन्दा बढी रकम पूराना सडक आवधि गर्नमा नै खर्च हुने बताए।
उनका अनुसार अबको दुई महिनामा काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गरेर करिब ५० किलोमिटर सडक आवधिक गर्ने योजना छ।
त्यसो भए फागुनसम्ममा उपत्यकाका सडकमा सबै खाल्डाखुल्डी हराउँछन् त?
काठमाडौंका उपत्यकाको पानी वितरणको इन्जिनियरिङ सुनाउँदै सापकोटाले त्यो बेलासम्ममा सतप्रतिशत खाल्डाखुल्डी पुरिसक्न सम्भव नभएको बताए।
उपत्यकाको कतिपय खानेपानी वितरण प्रणाली जुद्धशमशेरको पालामा बनेको हो।
‘त्यतिबेला सडक साँघुरा थिए, सडकको किनारामा पानीको पाइप बिच्छाइएको थियो। त्यो धेरै तल पनि थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले सडक बिस्तार भयो। त्यो पानीको पाइप अहिलेका सडकको बीचमा पर्छन्। पाइप अहिले पूराना पनि भए र सडकमा सवारीको चाप पनि बढी भयो त्यसैले बेलाबेलामा फुट्छन् र सडकमा खाल्डा परिरहन्छन्। एउटा पुर्‍यो अर्को पर्छ।’
उनका अनुसार नयाँ खानेपानी वितरण प्रणाली नआउँदासम्म सडकको बीचमा खाल्डा पर्ने समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए।
त्यसो भए खाल्डा पर्नेबित्तिकै तुरून्तै त्यसलाई पुर्न सकिन्न?
सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी पाएको टिम केही सुस्त भएर पनि परिणाम सुस्त आएको सापकोटाले स्वीकारे।
‘सडक विभागमा त्यसको लागि टिम बनाएको छ। निकै अघिदेखि त्यही टिमले काम गरिरहेको छ। त्यसलाई विभागले रिप्लेस गर्न सकेको छैन,’ उनले भने।
टिमको ढिलासुस्ती मात्र होइन, उनीहरूसँग मेसिन पनि पूराना भएका बताए।
अहिले बजेट पनि पर्याप्त भएकाले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर दुई महिनाभित्रै सकेसम्म उपत्यकाका सबै सडकका खाल्डाखुल्डी पुरीने दाबी गरे।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आम मानिसले सडकमै निस्किएर गरेको विरोध गर्न थालेपछि पनि सडक निर्माण र मर्मत संभारमा पछिल्लो समय तिव्रता आएको छ।
कात्तिकको अन्तिम साता भक्तपुरको कमलविनायकदेखि नगरकोटको भट्टेडाँडासम्मको सडक निर्माणको ठेक्का पाएका ठेकेदारले काम नगरेपछि स्थानियले उनको फोटो गाडीको पछाडि झुन्डाएर विरोध जनाएका थिए।
खाल्डाखुल्डी पुर्ने नियमित काममा पनि सडक विभागले किन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन कुर्नुपर्ने हो?
सडक विभागका उपमहानिर्देशक सापकोटा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नु विभागको नियममित कार्य भएकाले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आवश्यक नपर्ने बताए।
‘सडक विभागभन्दा तल सडक डिभिजन कार्यलयलेनै यो काम आफैं गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने।
तर प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी भएकाले सडकको बारेमा चासो राख्नु स्वाभाविक भएको र त्यसले आफूहरूलाई पनि सचेत बनाएको उनले बताए।
किन भएको थियो पाँच वर्षअघि लेले वनमा आरतीको हत्या?
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भन्यो : डा. केसीको जीवन रक्षाप्रति संवेदनशील बन